मदन भण्डारी दुर्घटनामा परेको जीप यस्तो छ, कसरी भयो दुर्घटना ?
काठमाडौं, ३ जेठ - नेकपा एमालेका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारी एवं संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको २०५० साल जेठ ३ गते चितवको दाशढुंगामा जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो ।
पोखराको कार्यक्रम सकेर चितवन जाँदै गरेका उनीहरुको बस दाशढुंगा भन्ने स्थानबाट त्रिशुली नदीमा खसेको थियो । बा.अ.च. ८७२३ नम्बरको जीपमा सवार दुई नेताको निधन भएको थियो भने चालक अमर लामा भने जीवित थिए । जीवराज आश्रितको शव जीपमै भेटियो तर मदन भण्डारीको शव भने तीन दिनपछि मात्र फेला परेको थियो । तेश्रो दिन गुञ्जनगरको गाँजीपुर नजिक नदी किनारमा एउटा लाश भेटिएको जुन लाश मदन भण्डारीको थियो ।
दुर्घटनामा परेको उक्त जीप मोरङमा राखिएको छ ।
मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका– ३ स्थित “मदन भण्डारी संग्रहालय”मा राखिएको चितवनको दाशढुंगामा मदन भण्डारी दुर्घटनामा परेको क्षतिग्रस्त जीपको अवलोकन गर्दै स्थानीयबासी । तस्विर – सुमन घिमिरे, उर्लाबारी (मोरङ) रासस